कुकुरको आक्रमणबाट घाइतेको संख्या बढ्दो, घाइतेहरुलाई टेकु अस्पताल रेफर गरियो
जनता भ्वाइस calendar_today २५ साउन २०७७, 12:13 pm
साउन २५, जनता भ्वाइस संवाददाता, रामेछाप
मन्थलीमा कुुकुरले मान्छेलाई टोक्ने क्रम विगत दिनको तुलनामा आइतबार ह्वात्तै बढेको छ । आइतबार मात्रै मन्थली नगरपालिकाको सुनारपानीदेखि एउटा कुकुरले मान्छेलाई टोक्दै बसपार्कसम्म आइपुग्दा १५ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । सख्त घाइते हुनेमा मन्थली १ निवासी १२ वर्षिय संस्कार पौडेल रहेका छन् । निजको हात र पिँडौलामा गम्भिर असर परेको छ ।
त्यस्तै मन्थली ५ सुनारपानीकी ४५ वर्षिया राधा कार्की, २५ वर्षिया बिन्दा रम्तेल, मन्थली ११ गतेलुका २२ वर्षिय सुरोज मगर, मन्थली २ टेकनपुरका १३ वर्षिय सन्दीप बिसुन्के, ५३ वर्षिय डिल्ली सार्की लगायतहरु रहेका छन् । घाइतेहरुलाई थप उपचारका लागि टेकु अस्पताल रेफर गरिएको प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, मन्थलीले जनाएको छ ।
बिहान ११ बजेदेखि सुनारपानीमा ३ जनालाई आक्रमण गरी घाइते बनाउँदै सो कुकुर मन्थली झरेको भैरवी मा.वि. सुनारपानीका शिक्षक ज्ञानेश्वर घिमिरेले जनता भ्वाइसलाई जानकारी दिए । धेरै व्यक्तिहरुलाई टोक्दै हिँड्ने सो कुकुरलाई मन्थली बसपार्कबाट नियन्त्रणमा लिई मारिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । गत २ महिनादेखि मन्थली आसपासका धेरै व्यक्तिहरुलाई कुकुरले आक्रमण गरेको घटना दैनिक ७ जनाको हाराहारीमा आउने गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थलीका डा. युवराज सापकोटा बताउँछन् ।